Guddoomiyaha Maxkamadda Sare: Garsoorku horumar weynbuu sameeyay sanadkii tagay - Halbeeg News
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf
MUQDISHO(HALBEEG)-Shir sanadeedka Garsoorka Soomaaliya oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa lagu lafa gurayaa dib u habaynta muuqata ee uu ku tallaabsaday garsoorka dalka.
Shirkan ayaa ah midkii ugu horreeyay ee ka dhaca dalka tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe billowgii sagaashamaadkii.
Shirkan oo ay ka qeybgalayaan madax sare oo ka tirsan dowladda Soomaliya oo uu ugu horreeyo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda, Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirka garsoorka Xasan Xuseen Xaaji, xeer ilaaliyaha guud, Axmed Cali Daahir, guddoomiyaha maxkamadda sare, Baashe Yuusuf ayaa masuuliyiinta ka qaybgashay waxaa ay ka hadleen horumarka iyo caqabadaha soo wajahay garsoorka, waxaana ay soo bandhigeen qorshayaasha garsoorka ee mustaqbalka.
Guddoomiye Baashe oo hadal ka jeediyay shirka ayaa sheegay in hay’adda garsoorka ay waxbadan u hagaageen sanadkii tagay taasoo wax kusoo kordhineeysa hannaanka caddaaladeed ee dalka ka jira.
“Waxaan dajinnay nidaam maamul oo ku shaqeeya teknoonalajiyad casri ah, garsoorayaal si wanaagsan u tababaran, iyo wadiiqo aannu ku daba galno dhacdooyinka waaweyn si aan u hagaajinno adeegga aan bixinno,” ayuu yiri Baashe oo intaa sii raaciyay in ay dusha kala socdaan maxkamadaha gobolka Banaadir oo saldhig u ah la dagaallanka musuq maasuqa.
Wasiirka garsoorka ayaa isna sheegay in garsoorku uu yahay furaha xasilloonida siyaasadeed isaga oo tilmaamay in baahi weyn loo qabo in la dadajiyo dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa carrabaabay in xukuumaddu ay u heellan tahay dib u habayhnta ku socota garsoorka wuxuuna hoosta ka xarriiqay in xukuumadda iyo garsoorku ay ka wada shaqeyn doonaan hagaajinta tayada hay’adaha garsoorka.
Xukuumadda ayaa horay u ballan qaadday dhismaha guddiga adeegga garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga hase yeeshee illaa iyo imika arrinkaa ma uusan hir galin.